कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदा शरीर चुम्बकजस्तै बनेपछि...
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलकोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदा शरीर चुम्बकजस्तै बनेपछि…
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदा शरीर चुम्बकजस्तै बनेपछि…
विराटनगर / कोरोना भाइरसविरुद्धको दुवै डोज खोप लगाएका भारतको महाराष्ट्रस्थित नासिकका अरविन्द सोनारको शरीरले चुम्बक जस्तै काम गरिरहेको छ । अरविन्दले शरीरमा सिक्का र फलामका सामान टाँस्सिएको एउटा भिडियो सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्दै शरीर चुम्बक बनेको दाबी गरेका हुन् ।
उनको भिडियो भाइरल भएको छ । उनका छोराले खोप लगाएपछि मानिसको शरीरमा स्टिलका वस्तु टाँसिने बताएपछि सोनारले आफूमा प्रयास गरेर हेर्दा वस्तु टाँसिएपछि उनी चकित भएका थिए ।
अरविन्दले ९ मार्चमा कोभिशिल्ड खोपको पहिलो डोज र २ जुनमा निजी अस्पतालबाट खोपको दोस्रो डोज लगाएका थिए । र, कुनै प्रकारको समस्या नदेखिएको उनले बताएका छन् । १० वर्षअघि उनको बाइपास शल्यक्रिया भएको र दुई वर्षदेखि उनको मधुमेहको उपचार चलिरहेको छ । अरविन्दले आफ्नो शरीरमा फलाम र स्टिलका चिज टाँसिन थालेपछि आफ्ना डाक्टरलाई यसबारे बताएका थिए ।
तर खोपका कारण यस्तो हुन नसक्ने जानकारहरूले बताएका छन् । अन्धश्रद्धा निर्मूलन समितिका डाक्टर हामिद दाभोलकरका अनुसार शरीरमा सिक्का र भाँडा टाँसिनु भौतिक विज्ञानको हिसाबले सम्भव छ ।
छाला ओसिलो भएमा र टाँसिने स्थानमा भ्याक्यूम क्याभिटी बनेको खन्डमा यस्तो हुनु सम्भव हुने बताएका छन् । तर, यसलाई खोपसँग जोड्नु सही नभएको उनको भनाइ छ । जेजे मेडिकल कलेजका डीन डा. तात्यारावे लहानेले पनि सोनारको दाबी खारेज गरेका छन् ।
विश्वभर एक अर्बभन्दा बढी मानिसले खोप लगाइसकेका छन् । कोभिड खोप र शरीरमा स्टिल तथा फलामका सामान टाँसिनुमा कुनै सम्बन्ध नगरेको हुँदा यसलाई खोपसँग जोडेर हेरिनु नहुने उनको भनाइ छ ।
नासिकका जिल्ला चिकित्साधिकारी डा. अशोक थोराटका अनुसार कोभिडको खोपका कारण यस्तो हुन नसक्ने बताउँदै उक्त बिषयमा अध्ययन हुने बताएका छन् । इन्डियन मेडिकल असोसिएशनका सदस्य समीर चन्द्रारातेका अनुसार खोप लगाएपछि ज्वरो आउने, दुखाइ हुने हुन्छ । र, यसलाई खोपसँग जोड्न नमिल्ने उनले बताए ।
यस्ता अफवाहले खोप अभियान प्रभावित हुने बताउँदै उनले कुनै व्यक्तिको शरीरबाट धातु टाँसिनुको अध्ययन भौतिक वैज्ञानिक र धातु वैज्ञानिकले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।-बिबिसीबाट